5 Hacks Gaadiidka Handy Waayo, Luton Socotadu | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka ee Britain > 5 Hacks Gaadiidka Handy Waayo, Luton Socotadu
Inta badan Tirraa by hooska dheer ay deris weyn London, Luton ee Bedfordshire waa jawharad qarsoon in ay si fiican booqo.
Aasaasay socda qabashada gobolka by Saxons ee Century Lixaad ee, waxaa nolosha bilowday a 'Tun' (dejinta) taas oo kor u booday by bangiyada of Lea Webiga. qarniyo Fast Forward yar, iyo 'Lea Tun' ahayd magaalo suuqa dhexdhexaad ah qaar ka mid ah 800 deggan, kuwaas oo inta badan ka badbaaday by beeraha iyo ganacsiga.
Maalmahan, hooyo Lutonites iyo martida badan oo soo jiidashada leh si ay u sii mashquul - oo ay ku jiraan goobaha sida kuwa jardiinooyin cagaaran iyo waxyaabo taariikhi ah oo taariikhi ah oo ka mid ah Xarunta Discovery Discovery Center iyo buuraha aan la sii deyn, dooxooyinka, iyo wadooyinka hortayada ee Barton Hills Kaydinta Dabiiciga.
Waxaa kale oo sidoo kale meel ay fududahay in ku dhawaad ​​hesho iyo saldhig cajiib ah adventures ka sii baxsan - sidaas oo in maanka, halkan shan anfacaya gaadiidka hacks u safraya Luton.
safarka Bus kana soobixiya wax la faa'iidooyin badan - waa degdeg ah, ku habboon, oo wuxuu ka tagi karaa wax ka yar raad-kaarboon ka badan safarka baabuur (laakiin aan ka badnayn tareennada, safarka tareenka ayaa weli loo arkaa gaadiidka ugu Eco-saaxiibtinimo).
Oo Luton, waxa kale oo laga furay fursado cajiib ah si aad u hesho in la ogaado deegaanka, kaas oo isla markiiba ka dhigi doonaa inaad dareentid sii badan guriga.
info baska Luton Council ee waxaa haboon tashiga ka hor intaadan imaanin magaalada.
Haddii aad ku salaysan in Luton in muddo ah, gadashada baaskiil waa fikrad cajiib ah.
Waxaa jira badan oo meelaha baadiyaha ah si ay u sahamiyaan gaadiidka dhow oo laba taayir ka yeela u dhex maraan magaalada xarunta ilmaha play.
Cycle King at 56-66 Dunstable Road ee Luton leeyahay tiro balaadhan oo ah baaskiilada, ay ka mid yihiin korontada, tandes, iyo xitaa dinaar-farthings - hubaal waxaad ka heli doontaa wax ku habboon.
Waxaad si fudud u safri kartaa Luton ee raaxada ee tareen laga dalal sida London, Birmingham iyo mid taabanaya, sidaa darteed waxaa jira cudur daar lahayn in aan ka fiirsanayn aad soo socda fasaxa qoyska.
Browse bogga Luton Station National Tareenka ee oo waxaad ka heli doontaa Xoolo ah macluumaad ku saabsan helitaanka iyo ka Idaacadda, tas-hiilaadka sida musqulaha, iyo marin u socodka.
Waxaa jira xitaa a map anfacaya si loo hubiyo in aad hesho saa'idka aad - cajiib ah.
Marka aad qorsheyneysa inay rinji cas Luton, tayaasha taxi ah in aad qaadato inta u dhaxaysa godad waraabinta waa fikrad caqliga leh.
Waxaad ka heli doontaa fursado badan taxi curbside, laakiin goluton.com waa mid ka mid ah wadayaasha ugu weyn ee magaalada iyo waxaad badbaadin kartaa lacag caddaan ah by tayaasha hor online.
Wax kale oo weyn oo ku saabsan gaadiidka tagaasida ayaan loo baahnayn darawal loo xilsaaray - sidaas kooxdaada oo dhan raaxaysan kartaa raaxo habeenkii oo dhan.
Airport Luton waa launchpad cabsi for duulimaadyo kala duwan oo dalal xiiso leh - oo ay ku jiraan Aberdeen, Malaga, iyo Zurich - si qorraxda, badda, iyo xitaa baraf ayaa kaliya hop gaaban u jira.
Haddii aad tahay raaxo badan wadista garoonka diyaaradaha, SkyParkSecure.com ayaa la dhigto garoonka Luton taasi ammaan iyo la awoodi karo.
Iyadoo Waxaad faraskaaga ku fuushaa ammaan guriguu dhigtay, aad jet off karaa dareen si buuxda u deji.
Raac shan hacks gaadiidka anfacaya oo waxaan kaa dhigi doonaa ugu of Luton - ka dib waxaad na uga mahadcelin karaa!
Taasi our liiska! La wadaag talooyinkaaga safarka Luton adiga oo la wadaagaya qoraalkan barta Twitter-ka.
Si aad u heshid la dhigto ugu fiican London isticmaalka SkyParkSecure, laakiin si aad u hesho tigidhada tareenka ugu wanaagsan ee London, isticmaalka Save A tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-handy-transport-hacks-for-luton-travellers%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / ZH-CN si / fr ama / TR iyo luuqado badan.
#garoonka #park Luton travellers tareenada